Franck Muller (Watch) - Drive Myanmar
Drive Myanmar > News > Features > Cars > Luxury Cars > Franck Muller (Watch)
Franck Muller (Watch)
Franck Muller သညျ လကျပတျနာရီလုပျငနျးလောကတှငျ ပါရမီိရှငျအဖွဈ အမြားကတဈခဲနကျ ခြီးကြူးခွငျးခံရ သော Swiss လူမြိုး လကျပတျနာရီပွုလုပျသူ တဈယောကျဖွဈပါသညျ။ အမှတျတံဆိပျ တညျထောငျပွီး နှဈ ၂၀ အတှငျးလောကျတှငျ Franck Muller သညျ Tourbillion စသညျ့ ကမ်ဘာ့ ပထမတနျးစား ခံ့ညားထညျဝါသော နာရီဆနျးပေါငျး ၃၀ ကြျောကို အောငျမွငျစှာ ပှဲထုတျပွသနိုငျခဲ့ပါသညျ။ ဒီဇိုငျးသဈမြားနှငျ့ ပတျသကျသော တီထှငျမှုမြားစှာကို ထုတျလုပျဖနျတီးနိုငျခဲ့ပါသညျ။ Franck Muller သညျ အငျမတနျအနုစိတျသော လုပျဆောငျမှုမြားနှငျ့ အတူ သေးငယျသညျ့ စကွဝဠာလေးတဈခု အဖွဈ ဖှဲ့စညျးပုံဖျောထားသညျ့ အနုပညာလုပျငနျးစုတဈရပျအဖွဈ ရိုးရာနညျးပညာမြားအသုံးပွုပွီး နာရီစကျပစ်စညျးမြားကို အဆငျ့မွှငျ့တငျပေးခွငျးအလုပျတှငျ အောငျမွငျစှာလုပျဆောငျနိုငျခဲ့ပါသညျ။ လကျပတျ နာရီလုပျငနျး မှတဆငျ့ အခြိနျ၏ဆနျးသဈသော ရှငျးလငျးခကျြမြားကို တငျပွနိုငျမှုကွောငျ့ ၄ငျးအနဖွေငျ့ “အခြိနျရဲ့ ဒဿနပညာရှငျ´´ အဖွဈကြျောကွားခဲ့ပါသညျ။ သူ၏ လကျပတျနာရီမြားသညျ လှပကွော့ရှငျးစှာ မှမျးမံထားပွီး ရှုပျထှေး၍ အနုစိပျလှသော စကျကရိယာမြားနှငျ့ ဖှဲ့စညျးတညျဆောကျထားပါသညျ။
Master Banker ဆိုတဲ့နာရီလေးကိုအခြိနျနဲ့ တပွေးညီလှုပျရှားနရေတဲ့ ဘဏျလုပျငနျးရှငျမြား အတှကျ ရညျရှယျထုတျလုပျထားခွငျးဖွဈပွီး မတူညီတဲ့ အခြိနျ (၃)မြိုးကို နာရီသော့သီး တဈခုတညျးနှငျ့ခြိနျညှိနိုငျသော ဖနျတီးမှုလကျရာတဈခု ဖွဈပါတယျ။
Frank Muller Backs & Strauss Yangon
Sedona Hotel Yangon No1. Kaba Aye Pagoda Road .Yankin Township Yangon . Myanmar.
Franck Muller သည် လက်ပတ်နာရီလုပ်ငန်းလောကတွင် ပါရမီိရှင်အဖြစ် အများကတစ်ခဲနက် ချီးကျူးခြင်းခံရ သော Swiss လူမျိုး လက်ပတ်နာရီပြုလုပ်သူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်။ အမှတ်တံဆိပ် တည်ထောင်ပြီး နှစ် ၂၀ အတွင်းလောက်တွင် Franck Muller သည် Tourbillion စသည့် ကမ္ဘာ့ ပထမတန်းစား ခံ့ညားထည်ဝါသော နာရီဆန်းပေါင်း ၃၀ ကျော်ကို အောင်မြင်စွာ ပွဲထုတ်ပြသနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဒီဇိုင်းသစ်များနှင့် ပတ်သက်သော တီထွင်မှုများစွာကို ထုတ်လုပ်ဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ Franck Muller သည် အင်မတန်အနုစိတ်သော လုပ်ဆောင်မှုများနှင့် အတူ သေးငယ်သည့် စကြ၀ဠာလေးတစ်ခု အဖြစ် ဖွဲ့စည်းပုံဖော်ထားသည့် အနုပညာလုပ်ငန်းစုတစ်ရပ်အဖြစ် ရိုးရာနည်းပညာများအသုံးပြုပြီး နာရီစက်ပစ္စည်းများကို အဆင့်မြှင့်တင်ပေးခြင်းအလုပ်တွင် အောင်မြင်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ လက်ပတ် နာရီလုပ်ငန်း မှတဆင့် အချိန်၏ဆန်းသစ်သော ရှင်းလင်းချက်များကို တင်ပြနိုင်မှုကြောင့် ၄င်းအနေဖြင့် “အချိန်ရဲ့ ဒဿနပညာရှင်´´ အဖြစ်ကျော်ကြားခဲ့ပါသည်။ သူ၏ လက်ပတ်နာရီများသည် လှပကြော့ရှင်းစွာ မွမ်းမံထားပြီး ရှုပ်ထွေး၍ အနုစိပ်လှသော စက်ကရိယာများနှင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားပါသည်။
Master Banker ဆိုတဲ့နာရီလေးကိုအချိန်နဲ့ တပြေးညီလှုပ်ရှားနေရတဲ့ ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်များ အတွက် ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး မတူညီတဲ့ အချိန် (၃)မျိုးကို နာရီသော့သီး တစ်ခုတည်းနှင့်ချိန်ညှိနိုင်သော ဖန်တီးမှုလက်ရာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
2018 Subaru Cross trek improves on an already winning formula
လုံခွုံစိတျခရြမှုကို အလေးထားကာ နောကျဆုံးပျေါ နညျး ပညာမြားဖွငျ့ထုတျလုပျထားသညျ့ GAC ၏ GS 4